ဘွန်​လေး​မှ​သည် သီ​ရိ​လင်္ကာ​ဆီ​သို့ – MrDBA Blog
Posted in ကြော်ငြာ, ခရီးသွားမှတ်တမ်း - June 15, 2009 - 16 Comments
ပြီး ​ခဲ့​တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့​က ​ဘွ​န်​လေး​မှာ ပြောင်း​ရွေ့​ကာ သာသနာပြု​နေ​တဲ့ ဗုဒ္ဓ​ဂါ​ယာ သု​ခါ​ရာ​မ​ကျောင်း​ရှိ​ရာ​ကို တစ်​ခေါက်ရောက်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ပထမ​ဦးစွာ ဘာ​ကြောင့်​သွား​ခဲ့​သလဲ မ​ပြော​ခင်​မှာ အဲ​ဒီ​ဘုန်းကြီး​ကျောင်း​အသစ်​ကို ဘယ်​လို​ရောက်​အောင်​သွား​ရ​တယ်၊ သွား​နိုင်​တယ်​ဆို​တာ​လေး​ကို လက်​တို့​ချင်​ပါ​သေး​တယ်။ ဘုန်းကြီး​ကျောင်း​ရောက်​ရင် ဖုန်း​ခဏခဏ​လာ​သ​မျှ​ဟာ ဘယ်​နား​ရောက်​နေ​လို့ ဘယ်​လို​ဆက်​လာ​ရ​မယ်​ဆို​တာ​ကို လမ်း​ညွန်​တောင်း​တောင်း​နေ​တာ​ကို​ဘဲ မြင်​နေ​ရ ကြား​နေ​ရ​တာ​ကြောင့် မ​ရောက်​ဖူး​သေး​သူ​များ​အတွက် ပါ​တ်​ဝန်းကျင်​တည်​နေရာ​ကို ဓါတ်​ပုံ​များ ဝေ​ဝေဆာ​ဆာ​နဲ့ ရှင်းလင်း​ပြော​ပြ​ပေး​သွား​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ (ဟ​မ် .. သ​တင်း​ကြော်ငြာ​နေ​တာ​နဲ့ တူ​တူလာ​ပြီ။)
ဆက် ​သွယ်​ရန်​လိပ်စာ​ကတော့ No. 264, Westwood Ave, (Off Jurong West Ave 5) Singapore 648464. Tel: (65) 6777 7018. လာ​နိုင်​တဲ့ လမ်း​ညွှန်​ကတော့ Bonlay Interchange မှ​နေ​၍ 181 ကို ​၅​မှတ်တိုင်​စီး​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ 243​လဲ​ရောက်​ပေ​မယ့် 181​လောက်​သွား​ရ​တာ လွယ်ကူ​မယ်​မ​ထင်​လို့​ပါ။ 181​ကို ​၅​မှတ်တိုင်​စီး​ပြီး​တာ​နဲ့ ​၅​မှတ်တိုင်​မြောက်​မှာ​ဆင်း၊ ရှေ့​ကို​နဲ​နဲ​ဆက်​လျှောက်​ရင် Condominium တစ်​ခု​ကို​တွေ့​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပြီး​တော့ အဲ​ဒီ​ကွန်​ဒို​ကို ကျော်သွား​ပြီး​တာ​နဲ့ ဘုန်းကြီး​ကျောင်း​တည်​ရှိ​ရာ ခြံ​ဝင်း​ဘေး​ကို ရောက်​ပါ​ပြီ။
မြေပုံ ​မှာ ပြ​ထား​တဲ့ အစိမ်း​ရောင်​လိုင်း​ကလေး​ကတော့ 181 သွားရာလမ်း​ကြော​င်း​ဖြစ်​ပြီး​တော့ နောက်ဆုံး​မှတ်တိုင် ရောက်​ခါ​နီး​လေး​ကို​သာ ကပ်​ပြီး​ပြ​ထား​တာ​ပါ။ ပုံ​မှာ ထောင့်​ချိုး​ကွေ့​သွား​တဲ့ မီး​ပွို​င့်​ထောင့်​ကတော့ Gek Poh Shopping Center ဘဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ မီး​ပွို​င့်​မှာ ကွေ့​ပြီး​ရင် ရောက်​တဲ့​မှတ်တိုင်​မှာ ဆင်း​ရ​ပါ​မယ်။
လမ်းမ ​ရဲ့ တစ်ဖက်​ခြမ်း​က​နေ လှမ်း​ကြည့်​ရင် မြင်​ရ​မယ့် ဘုန်းကြီး​ကျောင်း​ရဲ့ ဘေး​မှ မြင်​ရ​ပုံ​ပါ။ ကိုယ်​က ကား​မှတ်တိုင်​က​နေ လမ်းလျှောက်​သွား​ရင် အဲ​ဒီ​ခြံ​ဝင်း​ရဲ့ ဘေး​ကို ကပ်​လို့​ရောက်​သွား​မှာ​ပါ။ အခု​တော့ ခြံ​စည်းရိုး​မှာ သာ​သ​နာ့​အလံ​လေး ထောင်ထား​ပါ​တယ်။ နဲ​နဲ​သတိထား​ကြည့်​မိ​ရင် တွေ့​နိုင်​ပါ​တယ်။
ကျောင်းပေါ်ကို တက်သွားနိုင်မယ့် လှေခါး။
ဘုန်းကြီး ​ကျောင်း​ရဲ့ အတွင်း​ပိုင်း အပြင်​အဆင် အကျယ်အဝန်း​ကတော့ Eunos မှာ​ရှိ​တဲ့ ဓါတ်​တော်​တိုက်​လို ပုံစံ​မျိုး​ပါ​ဘဲ။ သုံး​ထပ်​တိုက် ထောင့်​ခြံ​ဖြစ်​တဲ့​အတွက် မြေ​နေရာ​နဲ​နဲ​ပို​ရ​ပြီး​တော့ ရှေ့​နဲ့​နောက်​ဘက်​မှာ အ​ကျွေး​အမွေး အချက်​အပြု​တ်​လုပ်​လို့​ရ​နိုင်​တဲ့​နေရာ​ပို​လေး ရှိ​ပါ​တယ်။ ဆရာတော်​အနေ​နဲ့ စနေနေ့​တိုင်း ညနေ ဓမ္မ​စကြာ​ၤ​ရွတ်​ဖတ်​ပူဇော်​ပွဲ အ​မြဲ​ရှိ​မှာ​ဖြစ်​ပြီး​တော့၊ တနင်္ဂနွေ​မှာ​တော့ ကလေး​များ​အတွက် ယဉ်ကျေး​လိမ္မာ သင်​တန်း​များ ဖွင့်​လှစ်​နေ​တာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ယခင် က​လီ​မင်​တီ​ကျောင်း​မှာ ရှိ​စဉ်​က​ထ​ည်း​က လုပ်​နေ​ကြ​ဖြစ်​တဲ့ တရား​စခန်း​များ​ကို​လဲ ဒီ​ကျောင်း​မှာ​ဘဲ ဆက်လက်​ဖွင့်​လှစ်​သွား​ဖို့ စီမံ​နေ​ပါ​တယ်။
ကျောင်း ​ဝင်း​ထဲ​မှာ​လဲ သစ်ပင်​ပန်း​မာန်​များ​နဲ့ စိမ်း​စိမ်း​စို​စို​ရှိ​နေ​တာ​လေး​ဟာ​ဖြင့် တကယ်​ဘဲ စိတ်​ကြည်နူး​အေးမြ​စေ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
မူလ​အိမ်​ပိုင်​ရှင်​ရဲ့ အ​လှ​မွေး​ငါး​တွေ​က​လဲ ပန်းခြံ​ထဲ​က ရေကန်​ထဲ​မှာ မျက်စိ​အ​လှ​ဖြစ်​စရာ​ပါ။
အဲ ​ဒီ​နေ့​က​ရောက်​သွား​ရ​တဲ့ အကြောင်း​ကတော့ ကျောင်း​ထိုင်​ဆရာတော် ဦး​သု​ပီ​ယ​၏ သိက္ခာ​ထပ်​ပွဲ​အတွက်​ဘဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဆရာတော်​နဲ့ က​လီ​မင်​တီ​မှာ​က​ထ​ည်း​က ရင်းနှီး​ကျွမ်းဝင်​ရှိ​တာ​က​တစ်​ကြော​င်း၊ သိက္ခာ​ထပ်​ပေး​မယ့် အ​လှု့​ရှင်​နဲ့​က​လည်း ရင်းနှီး​နေ​တာ​က​တစ်​ကြော​င်း​တို့​ကြောင့် အလှု​မှာ​သွား​တီး (အဲ​လေ) အလှု​မှာ​သွား​ပြီး အားပေး​ချီး​မြှောက်​ဖြစ်​တယ်​ပေါ့။
မနက် ​ခင်း​ဆွမ်း​ကပ် နေ့​လည်​တရား​ချီးမြှင့်​ပြီး​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ နေ့​လည်​၂​နာရီ​မှာ ကြိုတင်​ငှားရမ်း​ထား​တဲ့ ကား​နဲ့ ဒကာ​ဒကာမ​များ​အပါအဝင် ဘုန်း​တော်​ကြီး ​၈​ပါး​တို့​ဟာ သိက္ခာ​ထပ်​သိမ်​ဝင်​ရန်​အတွက် ဆီ​ရ​မ်​ဂွမ်း​အနီး​တ​ဝိုက်​မှာ​ရှိ​တဲ့ သီ​ရိလင်္ကာ ​ဗုဒ္ဓ​ဘာသာ ကျောင်း​ရှိ​ရာ​ကို ဆက်လက်​ထွက်​ခွာ​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။
သီရိ​လင်္ကာကျောင်း​ဟာ​လည်း ဝင်း​ခြံ​အကျ​ယ်​ကြီး​ထဲ​မှာ တည်ထား​တာ​ဖြစ်​ပြီး​တော့ ဗုဒ္ဓ​ဂါ​ယာ​က ​ဗော​ဒိ​ညောင်​ကို ပင်ပွား​ယူ​စိုက်ပျိုး​ထား​တာ​ကို တွေ့​ရှိ​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ်။ ဆရာတော် သိမ်​ဝင်​မယ့် သိမ်​ကတော့ အဲ​ဒီ​ဗော​ဒီ​ညောင်​ရဲ့ န​ဘေး​လေး​မှာ သေး​သေး​ကွေး​ကွေး​ပါ​ဘဲ။ ဒီ​က​ပါလာ​တဲ့​ဆရာတော် ​၈​ပါး​ရယ် သီ​ရိ​လ​ကာ​ၤ​ကျောင်း​က ဆရာတော် ​၂​ပါး​ရယ် စုစုပေါင်း ဘုန်း​တော်​ကြီး​၁​ဝ​ပါး​ဟာ သိမ်​တွင်း​ဝင်​ရောက်​သွား​ကြ​ပါ​တော့​တယ်။ ဆရာတော်​များ သိမ်​အဆ​င်း​မှာ လောင်း​လှု​နိုင်​ဖို့​အတွက် ဒကာ​ဒကာမ​များ​ဟာ အပြင်​မှာ​စောင့်ဆိုင်း​ရင်း ကျောင်း​ဝင်း​ထဲ​မှာ လှည့်ပတ်​ကြည့်​ရှု​ကြ​ပါ​တယ်။
ဗော​ဓိ​ညောင်​လေး သေချာ​ကြည့်​ရှု​ပူဇော်​လို့​ရအောင် အနီး​ကပ်​ရိုက်​လာ​ပေး​ပါ​တယ်။ (နောက်မှ ပုံ​ဆက်​တင်​တော့​မယ် ငိုက်​လာ​ပြီ။)
Tags : ဘြန္ေလး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
အချစ်​လား … သူ​ဖျားနေတယ်